Warmurtiyeed laga soo saaray Shirkii Maaliyada iyo canshuuraha Ee Adis-ababa
Erayo jacayl oo ku haboon in aad markasta adeegsato
Curis & Qoraal:Goosgoos
Erayo Si Xiiso Badan Loo Fasiray November 1, 0 Waa erayo ka mid ah kuwa aynu sida joogtada ah u isticmaalno oo qaab maadays ah uu u turjumay nin faylasuuf ahaa.
Eray kasta waxa uu siiyey macne ciddii fahamta leh macne iyo xikmad fog: Sigaarka: Waa duub buuri ah oo dhanna dab ka baxayo dhanka kalana nacas afkiisa ku hayo. August 25, 0 Duruusta Nolosha Gabar yar oo labada gacan ku heysatay laba xabo oo Tufaax ah ayaa soo gashay qol ay fadhiyeen labadeedi waalid. June 13, 0 -Waxaan bartay in jaamicadda iyo iskuulka aan wax kabaranno kaddibna aan imtixaanada galno, laakiin nolosha imtixaanka ayaan galnaa kaddib markaasaan wax barannaa.
Waxa aan murugoodaa marka aan: — Waxa aan murugoodaa marka aan xiiseeyo waqti fiican oo i dhaafay in uu soo noqdo. April 24, 0 Xikmado Jaceyl 1. Jaceylku waa waxa ugu quruxda badan ee la heysto, waxa ugu adag ee la kasbado iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo 2. Goorti aad tiraahdo Waan ku jeclahay, waxaad ballan ku … Halkudhegyo Laga Faaidayo Casharro Muhiim Ah Iyo Waayo-aragnimo February 22, 0 Duruufaha adduun ee maalinlaha ah iyo waayoaragnimada qofku korodhsanayaa waa casharo muhiim u ah nolosha qofka la kulmayaya iyo dadka kaleee uu u sii tabinayo.
Qormadan waxa aynu ku eegaynaa halkudhegyo dad caan ahi ka tageen oo waano ka noqon kara waayaha adduunka. Sharafta noloshu maaha maaha in aanad weligaa kufin, balse waa in aad kici karto mar kasta oo … Xikmado Dhaxalgal Ah November 20, 0 Sida uu sheegay nabi muxamed N.
H xikmaddu waa baadi ka maqan qofka muslimka ah. Haddaba halkaan waxaan idin kugu soo gudbinaynaa qaar ka mid ah xikmadihii laga dhaxlay waaya araggii dunida soo maray. Konfooshiyoos waa faylasuufki ugu horreeyay dalka china, sidoo kale waxa uu ahaa nin aad u xikmad badan.
Haddaba halkaan kaga bogo xikmadaha dhaxal galka ah ee laga … Erayo Xikmad Badan Oo Ku Saabsan Hinaasaha Ama Masayrka September 19, 0 Waa qormo aynu ilo kala duwan oo afka Carabiga ku qoran aynu ka soo ururiney oo iftiiminaya ereyo xikmad badan xambaarsan oo laga yidhi hinaasaha ama maseyrka. September 13, 0 Xikmadda Maanta: — Waxaa uu waayuhu I baray in dadka kuwa iigu waxyeelka badani ay yihiin kuwa aan kalsoonidayda oo dhan siiyey. Shakespeare — Si aynu dadka ugu qancinno sida aynu u fikirayno, marka hore waa in aynu fahamno sida ay iyagu u fikirayaan.
Haddii aad doonayso in … Xikmad Dahabi Ah February 13, 0 1. Tus Xushmad xitaa dadka aan u qalmin; Ma aha ka falcelin dabeecadooda, laakiin waa sawir ka bixin adiga dhaqankaaga qadarinta ku dhisan 3. Mararka qaar waxaa wanaagsan in qofku iska aamuso inti uu dadka u sheegi lahaa dareenkiisa sababtoo ah way ku sii dhaawaceysaa keliya goortii aad ogaato inay ku maqli karaan laakiin aysan ku fahmi karin 2. Waxaan ka xiran karnaa indhaha waxyaabaha aynaan rabin in aan aragno laakiin kama xiran karno qalbigeena waxyaabaha aynaan rabin in aan … Xikmado Ku Saabsan Saaxiibtinimada February 5, 0 Saaxiibtinimada 1.
Saaxiibada aad leedahay saddex nooc ayay u kala baxaan: B Kuwa ku caawiyay waqtigi aad dhibka ku jirtay. T Kuwo kaa tagay xilligi dhibaatada ku heysatay.
J Kuwa iyagu dhibta ku gashay 2. Qeybta ugu wanaagsan Nolosha waa; Marki Qoyskaagu kuu fahmaan sidi Saaxiib oo kale, Saaxiibadaana kuu taageeraan sidi Qoyskaaga oo kale 3. Saaxiibada beenta ah waa … Halku-Dhegyo Xikmad Badan January 14, 0 1- Dadaal iyo qiime waxaan ku bixinaa xirashada dharka ugu qurxoon iyo kuwa ugu qaalisan, balse waxaan is ilowsiinaa bedelista dhaqamada iyo dabeecadaheena guracan. Ogow, weelka qaaligaa ma sameeyo cunto dhadhan macaan. Saaxiibtinimadu ma aha qofka aad waqtiga ugu dheer taqaanay.
Saaxiibku waa qofka intuu kuu yimaado ku yiraahdo; anigaa halkan kuu jooga oo ku garab taagan, ficilna ku cadeeya 2. Dib waad u aqrisan kartaa qoraal, fariin ama Buug, Waad ku soo ceshan kartaa video muuqaal ah ama mid dhageysi ah laakiin … Page 1 of 51 2 3 4 5 » Advertisement.
Tubta Curiska Haddii ay kuula ekaato ama laguu soo jeediyo in aad saabsane wax ka curisid, waxaa lagaa doonayaa laba arrimood.
Kow: in aad fakartid. Laba: in aad qortid. Hababkaa kala duwani waa ay kala qurux badan yihiin. Qaarkood waxay taabtaan dareenka, naftana waa ay soo jiitaan, qaarkood waa laga didaa, qaarna waa loo qaateen.
Markii ay sawirradaasi qaabka aad hadalka u dhigi doontid ku abuurmaan hummaagga curiyaha ayaa uu caqligu ka doortaa kan ugu sarreeya, madasha la geyn doonana uu cuntama. Haddii ay tahay meel colaad laga abaabulayo, wuxuu xushaa erayo cuqdadda soo kiciya, naftana ku kallifa in ay halista u bareerto. Haddii ay gole farxadeed tahayna wuxuu doortaa weero laabta qaboojiya.
Ka dib marka ay muuqaalladu qaabka aad hadalka u dhigi doontid isugu kaa toosaan, kuwii saabsanaha ku habboonaana aad ka xulatid waa in aad isku hawshid sidii aad isugu aaddin lahayd, isugu dumi lahayd, u habayn lahayd, una kala hormarin lahayd. Adiga oo aan isdhibayn ayaad isukeenaysaa intii isleh, waxaadna ku garanaysaa sida ay isula jaanqaadayaan, in lafhmana ay u fududdahay. Haddii aad intaa awood u yeelatid, waxaa kuu suurtagalaysa in qalinkaagu uu soo bandhigo muuqaalkii maangalkaa ahaa ee ku soo dhacay oo ah sawir la taaban karo.
Waana in bilowga lagu caddeeyaa danta uu qoraalkaani darteed u yimid. Kolka uu qodob dhammeeyo oo mid kale u gudbayo waa in uusan iska boodine, uu jiraa dabar isku xiraya, si hadalku uu u noqdo mid tidcan oo luquntu isugu tallaalan tahay. Waa halkan meesha uu ka jiro loollanka aftahannimo ee ay maskaxdu ku soo bandhigto xirfadaheeda, qalimaantuna ay ku muujiyaan kartidooda.
Waa meel in qofku soo gaaraa ay waqti iyo dedaal u baahan tahay. Waa heer u baahan in uu qofku soo tabcado dhadhan wax lagu curiyo iyo garaad carbisan.
Wax kastoo qof ku soo dhacana ma noqdaan wax dhalaalkiisu sarreeyo, balse, dadka qaar baa dheeri lagu mannaystaa. Sidaa oo ay tahayna ha u moodin in aan dhiirrigelinayo in laga boodo dhinaca dhisitaanka macaanida oo aan leeyahay erayo qurxoon oo qura ha la tidcee, waxa aan tilmaamayo, waa in qofka dhugmada lihi uu yahay kan isku dhisi kara eray macaan iyo micne cuddoon. Qofkii erayo qurxoon curiya oo aan micna samaynayn waa sida qof qurxoon oo haddana dhoys ah.
Erayadu ha noqdaan jir jaah wanaagsa oo ay ruuxdiisu tahay nuxur qurxoon. Balse, macaanida wanaagsan iyo erayada hagaagsan waxaa la unki og yahay oo fudud macaanida. In badan ayaan arkay waratada suuqa iyo dadka xirfadaha iyo sancooyinka leh oo curinaya weedho macnahoodu sarreeyo balse aan awoodin curinta laba eray oo qurxoon, macnahaasna gudbin kara. Sideedana waxa dadka soojiita waa erayada gudbiya macaanida, waana isla erayada kuwa dadka dareenkooda qafaasha.
Dadka dhammaanti macnayaal wanaagsan way soojeedin karaan oo qof jaahil ah oo haddana maskax badan waa uu jiraa. In qofku uu wax macno leh ku hadlana waa wax maskaxda iyo garashada ku xirane, maaha wax cilmi barasho oo qura u baahan.
Inta aad firfircoon tahay ee aan caajis iyo daal ku haleelinna ku shaqayaso. Kolka aad noogto ka naso, waayo? Wax kasta way isdhimaan kolka la daalo, wax kasta oo qaali ahna diiftu way qiime dhintaa. Waxyiga naftu waa il biyood, hadba xoogaa laga waraabo soo daysa oo haddaad u moogaysatidna aad ka dhargayso oo aad nafacsanayso balse, haddii aad dhuritaanka ku badiso way gurtaa, waxtarkeeduna wuu isdhimaa.
Ogsoonoow in dedaalkaaga tirada badan ee aad maalintii samayso ee kuugu deeqa afkaarta uu yahay mid u baahan kaltamid iyo nasin ka badan inta ay il-biyeedku u baahan tahay. Iska ilaali qardajeexnimada, waayo wax walba way kaa xannibmayaan, xirnaanshuhuna waxuu kaa gurinayaa macaanida, erayadana wuu kaa foolxumaynayaa.
Qofkii raba inuu wax macno wanaagsan leh gudbiyo, ha u xusho eray wanaagsan, waayo? Haddii eraygu uu noqonayo mid aan habdhac lahayn, booskiisa aan la haysan karin, meel iska qotomaya oo aan kuusha ku tidcamayn, fallaago ah oo weedha uu ku jiraba baxsad ka noqonaya, ha ku khasbin in uu nabadgalyada khalkhaliyo oo dhul aan dhulkiisii ahayn uu degaamaysato.
Waa ceebe iska dhawr. Haddaad rabtid in aad ka baxsato gorfayn iyo dhaliilid, marka horaba tix iyo tiraabba ha curin. Haddiise aad lugaha la soo gashid oo aadan u dhugmo yeelan, xirfaddaadana aadan kobcin waxaa kugu wiirsanaya mid aad adigu ka ceeb yar tahay, waxaana ku liidaya mid kaa hooseeya.
Marka aad istiraahdid wax curi haddii jawigu kaa hor-istaago tidcitaanka erayada oo intaad u fakartid aad kari weydo ha degdegin, iska sug oo arrinka u qaado daruufaha maalintu xaal ay wataan, la sugo gudcurka habeenka oo xilligaad firfircooni dareentid iskuday.
Kolkaas waa suuragal in ay isugu kaa aaddo oo aad jawaab heshid. Haddii Adiga oo in badan maskaxda nasiyay oo haddana kaadsiiyo badan sameeyay, waqti dheerna sugay ay kuu suuroobi weydo in aad qoraal qumman isku aaddiso waxaa kugu habboon in aad dib isuqiimayso oo aad ogaato sancada aad ugu xiisa badan tahay oo deetana aad ayada ku dedaasho, waayo?
Haddaan cad isukiin gelin ma aadan xiisayseenba. Wax walbaana wixii la qumman bay u hiloobaan. Waxaa habboon in aad taqaanno qirada macaanida si aad u miisaanto waxa aad qorayso iyo dadka akhrisan doona.
Sidoo kale waa in aad taqaannaa miisaanka xaaldaha si aad qolo iyo xaalad kasta hadal u qalma ugu jeedisid. Hadalkaagu ha noqdo mid macnihiisa iyo madashiisu isleeyihiin, mid akhristaha iyo xaaladda laga hadlayaba ay isleeyihiin.
Haddaad riyo tahay, weligay ma rabo inaan tooso. Ma xasuusan karo waxa u eg inaan ku jeclaan. Kaliya kaligey ma aanan raadineynin jacayl. Aniguba waan ku raadinayey.
Maalmahayaga oo dhammi adigay kuu sixran yihiin. Haddii aan qof ka soo qaadan karo dhulkan, weli waan ku soo qaadan lahaa. Marnaba ma hilmaami doono maalinta qudha ee aan jacaylka ku dhacno.
Weligaa hoosta ka xariiqin awoodda jacaylka dhabta ah. Waad la yaabaysaa, yaabaysaa oo i farxad gelisaa maalin kasta. Waxaad tahay isha kaliya ee ugu weyn farxadayda oo dhan. Waxaad tahay qorraxda noloshayda oo waan ku meertadayaa, waad i nafaqaysaa, waxaad i siisaa nolol. Xitaa saynisku ma sharxi karo waxa aan adiga adiga kaa dareemayo.
Jacaylku waa sida moolka oo kale cirka cas iyada oo hadhkeeda ku duuban badweynta hoosteeda. Jacaylkeennu waa sida cirifka oo kale in la kulmo midba midka kale welina ku duuban yahay maalin iyo baxay! Miyaad ogtahay sababta boosaska farta noogu jiraan? Taasi waa sababta oo ah, tayda, farahaaga ayaa si fiican u habboon. Waad ka dhici kartaa buur dheer, waad ka dhici kartaa geed dheer, laakiin sida ugu fiican ee aad u dhici karto waa inaad si qoto dheer u jeclaato aniga.
Markaan si qoto dheer indhahaaga u fiiriyo, iyaga dhexdooda waxaan ku arkaa qofka aan doonayo inaan noqdo, waan ku jeclahay. Waxa kaliya ee runta ah ee adduunyadu waa jacaylkeenna, waxay igu dareensiisay inaan noolahay. Waan ku jeclahay, cunug. Waxaan ku dhaaranayaa inaanan ku dhaawicin, waxaan leenahay hal qalbi oo labo ah inta aan is jecel nahayna way garaacdaa, waan ku jeclahay.
Waxaan rabaa inaan aad idiinku soo dhawaado oo aan dareemo sida qalbiyadeennu ugu garaaci doonaan wada noolaanshaha; Waan ku jeclahay gacaliso Waxaan kugu jeclaaday anigoo og in ay jiri doonaan waqtiyo farxad saafi ah iyo daqiiqado yar oo dhibaato ah. Kaa xiisay waa waxa igu dhibaya waxaanan ka baryayaa inaad soo afjari karto.
Kama xumahay inaad waxoogaa maqnaato; Waan ka xumahay inaanan tan u diyaar garoobin. Waxaan u maleynayay inay fududaan doonto, laakiin waxa kaliya ee aan ka fikirayaa waa inaan markale ku dhunkado. In kasta oo xanuunkani yahay mid aan loo dulqaadan karin, haddana ma quusanayo.
Waxaan sugi doonaa samir maalinta aan markale kula joogi doono. Marka, haye, jaceylkeyga. Weligaa ha sii deyn. Fadlan ogow inaan ku jeclaan doono xitaa markay maalmuhu ifaan. Tani maahan wax ku meel gaar ah Halkan uma joogo inaan tijaabiyo biyaha.
Waxaan halkaan u imid in la igu shubo, mana daneeyo haddii aan hafto. Markaad bilowdo inaad naftaada gaalowdo, iga fikir. Ogow inuu waligiis jiri doono qof adiga kugu aaminta gebi ahaanba. Kaliya fiiri dhinacaaga waadna i heli doontaa Kuwa aadan iloobi karin waa kuwa noloshaada saameyn weyn ku yeeshay.
Adiga ayay ii ahayd aniga. Had iyo jeer adiga ayaa ahaa. Waxay rabaan inaan ka hadlo xanuunka, adigana waan kaa fikiray. Jacaylku wuxuu noqon karaa mid xanuun badan. Xusuustu waa mid naxariis daran. Mararka qaar waxaan isweydiiyaa jacaylku ma mudan yahay in loo dagaallamo, laakiin markaa waxaan xusuustaa wejigaaga oo dagaal ayaan diyaar u ahay. Markaan indhaha xidho, waan ku arkaa. Markaan indhaha kala qaado, waan ku arkaa. Daqiiqad ma dhaafi karto adiga oo aan kaa fekerin. Waan ku jeclahay in ka badan inta ereydu qeexi karaan, dareenku wuu cabirayaa fikirkuna wuu qiyaasi karaa.
I tus habeen wanaagsan, waxaana kuu sheegayaa maalin si wanaagsan ku dhammaatay. Waxaad had iyo jeer ka dhigeysaa maalintayda.
Erayo Si Xiiso Badan Loo Fasiray November 1, 0 Waa erayo ka mid ah kuwa aynu sida joogtada ah u isticmaalno oo qaab maadays ah uu u turjumay nin faylasuuf ahaa. Eray kasta waxa uu siiyey macne ciddii fahamta leh macne iyo xikmad fog: Sigaarka: Waa duub buuri ah oo dhanna dab ka baxayo dhanka kalana nacas afkiisa ku hayo. August 25, 0 Duruusta Nolosha Gabar yar oo labada gacan ku heysatay laba xabo oo Tufaax ah ayaa soo gashay qol ay fadhiyeen labadeedi waalid. June 13, 0 -Waxaan bartay in jaamicadda iyo iskuulka aan wax kabaranno kaddibna aan imtixaanada galno, laakiin nolosha imtixaanka ayaan galnaa kaddib markaasaan wax barannaa.
Waxa aan murugoodaa marka aan: — Waxa aan murugoodaa marka aan xiiseeyo waqti fiican oo i dhaafay in uu soo noqdo. April 24, 0 Xikmado Jaceyl 1. Jaceylku waa waxa ugu quruxda badan ee la heysto, waxa ugu adag ee la kasbado iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo 2. Goorti aad tiraahdo Waan ku jeclahay, waxaad ballan ku … Halkudhegyo Laga Faaidayo Casharro Muhiim Ah Iyo Waayo-aragnimo February 22, 0 Clo2 for sale adduun ee maalinlaha ah iyo waayoaragnimada qofku korodhsanayaa waa casharo muhiim u ah nolosha qofka la kulmayaya iyo dadka kaleee uu u sii tabinayo.
Qormadan waxa aynu ku eegaynaa halkudhegyo dad caan ahi ka tageen oo waano ka noqon kara waayaha adduunka. Sharafta noloshu maaha maaha in aanad weligaa kufin, balse waa in aad kici karto mar kasta oo … Xikmado Dhaxalgal Ah November 20, 0 Sida uu sheegay nabi muxamed N. H xikmaddu waa baadi ka maqan qofka muslimka ah. Haddaba halkaan waxaan idin kugu soo gudbinaynaa qaar ka mid ah xikmadihii laga dhaxlay waaya araggii dunida soo maray. Konfooshiyoos waa faylasuufki ugu horreeyay dalka china, sidoo kale waxa uu ahaa nin aad u xikmad badan.
Haddaba halkaan kaga bogo xikmadaha dhaxal galka ah ee laga … Erayo Xikmad Badan Oo Ku Saabsan Hinaasaha Ama Masayrka September 19, 0 Waa qormo aynu ilo kala duwan oo afka Carabiga ku qoran aynu ka soo ururiney oo iftiiminaya ereyo xikmad badan xambaarsan oo laga yidhi hinaasaha ama maseyrka.
Posted in Erayo qurxoon
thoughts on “Erayo qurxoon”
13.08.2021 at 05:24
15.08.2021 at 05:35
15.08.2021 at 23:56